Kuyini ukuhlukaniswa kweNdlu? - Imibuzo Ehlukene
Kuyini ukuhlukaniswa kweNdlu?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Izindlu Zezinkanyezi: Ukwahlukana
Izindlukukhonaukwehlukanayesikhala ngezansi nangaphezulu emkhathizwe wendawo. Siyazi ukuthi umhlaba uyaphenduka futhi ujikeleza ilanga. Ngenxa yokuhamba komhlaba okuhamba phambili, amaplanethi abonakala enyuka empumalanga. umkhathizwe wendawo, finyelela maphakathi nezulu bese usetha eNtshonalanga.
Esihlokweni sethu esibizwa ngeLong Division, sifunde ukuthi singaxazulula kanjani izinkinga zokuhlukanisa ngezinzuzo ezinde ezinamadijithi amaningi. Ukhiye wokwenza lokhu bekukweqa inkinga enkulu yokwehlukanisa kube uchungechunge lwezinyathelo ezincane futhi ezilula zokuhlukanisa, ukuzama ukwahlukanisa izinzuzo zedijithi eyodwa ngasikhathi ngenombolo yedijithi.
Ezibonelweni esizibonile, bekulula kakhulu ukuhamba ngamadijithi ngamadijithi ngoba besinabahlukanisi bezinombolo ezilodwa kuphela. Kepha kuthiwani uma kufanele? Ngabe usebenzisa le ndlela yokuhlukanisa izinkinga ngezici ezinkulu? uma, ngokwesibonelo, uhlukanisa ngenombolo enamadijithi amabili noma amathathu? Kulesi sifundo sizofunda ukuthi singabhekana kanjani nezinkinga ezinjalo.
Izindaba ezimnandi ukuthi uma unomusa, ngokwazi vele ukuthi wenzeni, ungahle ungakuqapheli. Ukubona engikushoyo, bheka lezi zinkinga ezimbili zokuhlukana. Bobabili banesahlukaniso esifanayo futhi bobabili banesihlukanisi samadijithi esisodwa.
Kepha lezi zinto ziyizinombolo ezahlukahlukene, futhi njengoba uzobona, lokhu kuzothinta inqubo yethu yokuhlukaniswa kwamadijithi ngamadijithi. Ukuxazulula le nkinga yokuqala, ake siqale ngokubuza, 'Kuthatha kangaki' 2 ukwenza u-5 noma cishe u-5? 'Noma cabanga ngale ndlela, “Bangaki' u-2 olingana kwaba-5?” Futhi kulula ukubona ukuthi impendulo ingu-2. Ngakho-ke sibeka u-2 njengenombolo yokuqala yempendulo yethu.
Bese siphindaphinda u-2 ngo-2 ongu-4, bese sisusa lokho okungu-4 koku-5, okusishiya nensalela engu-1. Manje sizoya kwidijithi yethu elandelayo futhi sidinga ukulanda ikhophi yayo ukuze sihlangane ne okusele kwidijithi yokuqala. Bese siyabuza, 'Bangaki' 2's abenza u-12? Kulula kakhulu: 6.
Ngakho-ke sibeka u-6 njengedijithi elandelayo yempendulo yethu. 2 × 6 = 12, bese kuthi engu-12 kususwe u-12 akusali okusele. Ekugcineni, ngedijithi yethu yokugcina, yize bekungekho enye esele, singayikopisha bese siyabuza: 'Bangaki' 2's benza 8? Impendulo ingu-4.4 × 2 = 8, ephinda ishiye okusele.
Lapho sahamba ngamadijithi ngamadijithi sahlukanisa inkinga yethu yaba yizinyathelo ezintathu zokuhlukanisa (eyodwa ngedijithi ngayinye) sathola impendulo yethu: 264. Manje ake 'sixazulule isibonelo esilandelayo. Futhi ekuqaleni nje uzothola ukuthi sinenkinga encane.
Uma sibuza, “Kuthatha kangaki ukuphakama ukwenza u-5 noma cishe u-5?” Impendulo ayikho. Futhi kungenxa yokuthi idijithi yokuqala (ethathwe yodwa) INGCANSI kunesehlukanisi. 8 ngu-TOO BIG, ukuhlukanisa ngo-5. Ngakho-ke kufanele senzeni ukuthi sihlanganise izinombolo ezimbili zokuqala ndawonye? Uma sihlanganisa aba-5 nababili ndawonye, ​​isinyathelo sethu sokuqala sizobe sibuza ukuthi, 'Bangaki abayi-8 abangama-52?' Lokho kungcono i-8 ihlukaniswe ngama-52 cishe izikhathi eziyisithupha.
Ngakho-ke sifaka u-6 kulayini wethu wezimpendulo, ngenhla nje kuka-2. Kungani ukhona? Ngoba bekufanele seqe idijithi yokuqala bese siyihlanganisa no-2. Uma besifuna ngabe sibeke uziro ngaphezu kwaleyo nombolo yokuqala ngoba abasi-8 ngeke BABelane ngalutho, futhi uma lokho kukusiza ukuthi ulandele ukuthi iyiphi inombolo enempendulo ku, umqondo omuhle lowo, kepha awuphoqelekile.
Ngakho-ke, u-6 × 8 = 48 bese kuthi u-52 kususwe u-48 asinikeze okusele okungu-4. Manje sinezinombolo ezi-1 kuphela esizozihlukanisa, ngakho-ke sikulethele ikhophi yalokho ukuhlanganisa nokunye bese sibuza ukuthi: 'Mangaki ama-8 bangu-48? ' Siyazi impendulo yalokhu ingu-6 futhi. I-6 × 8 ingama-48, engashiyi okusalayo.
Njengoba impendulo yethu ingama-66.
Uphawulile yini umehluko phakathi kwalezi zinkinga ezimbili? Besifuna ukuya kumadijithi ngamadijithi kuzo zombili lezi zinkinga, kepha enkingeni yesibili isihlukanisi besinkulu kunedijithi yokuqala yesabelo, ngakho-ke kulokhu bekumele sihambe amadijithi amabili kuqala. Futhi lokho kusisiza ukuthi sibone okuthile okubaluleke ngempela ngale ndlela yendabuko yokuhlukanisa isikhathi eside. Akudingeki ukuthi uhlale uhamba idijithi eyodwa ngasikhathi.
Ungahlephula okwahlukanisiwe kube 'ama-chunks' amakhulu wamadijithi, uma ufuna, bese usebenzisa inqubo efanayo kulawo ma-chunks amakhulu. Ungaya amadijithi amabili noma amathathu ngasikhathi, noma uzame nokuhlukanisa yonke ingxenye ekwahlukanisiwe ngesinyathelo esisodwa! Futhi ukuthatha izingcezu zayo ezinkulu ezihlukanisiwe kuvame ukuletha izinyathelo ezimbalwa zokuhlukanisa. Qaphela ukuthi inkinga yokuqala bekuyizinyathelo ezintathu, kepha eyesibili yizinyathelo ezimbili kuphela.
Izinyathelo ezimbalwa!? Ngiyawuthanda umsindo wawo! Lokho kubukeka njengomsebenzi omncane kakhulu !! Ah yebo zimbalwa izinyathelo zokuhlukanisa UMSINDO ongcono, kepha akunjalo.
Lokho kungenxa yokuthi lapho uhlanganisa amadijithi amaningi kulapho isinyathelo sokuhlukanisa siba nzima ngokwengeziwe, ngicabange ukuthi kuzwakala kukuhle kakhulu ukuthi kungabi yiqiniso. Kufana nokukhuphuka izitebhisi. Uma unezinyathelo eziningi ezincane, kulula ukuthi ukhuphuke ngalinye.
Kepha ngezinyathelo ezimbalwa nje ezinkulu, ngasinye kungaba yinselelo ngokwako, ngakho-ke sihlala sizama ukuhamba idijithi eyodwa ngasikhathi. Uma udinga ukwahlukanisa ukwahlukaniswa kube yidijithi eyodwa noma amabili ngasikhathi kulula kakhulu ngoba zonke izimpendulo zalezo zinyathelo ezincane zokuhlukanisa zisetafuleni lokuphindaphinda (owakhumbula, akunjalo?) Kepha lapho kufanele sihambe 3 noma amadijithi ama-4 ngasikhathi, kunzima kakhulu ukuthola impendulo yesinyathelo ngasinye. Kulungile, kepha isebenza kanjani nabahlukanisi bamadijithi amabili? Ah njengoba uzobona, abahlukanisi abanamadijithi amabili bayasiphoqa ukuthi sithathe izinyathelo ezinkulu! Ukubona engikushoyo, ake sizame ukuxazulula izinkinga ezimbili zokuhlukanisa ezintsha ezinezabelo ezifanayo nezifanele.
Kukhona abahlukanisi abasha ababili kuphela, futhi bobabili bangabahlukanisi abanamadijithi amabili. Ngale nkinga yokuqala, SINGAQALA ngombuzo othi, 'Bangaki' abangu-24 abalingana no-5? 'Kepha njengoba isihlukanisi sethu manje sinamadijithi amabili, sesivele sazi ukuthi AKUKHO ingxenye eyodwa yedijithi yesabelo ezoba nkulu ngokwanele ukuyihlukanisa. Ngakho-ke njengoba sinesihlukanisi esinamadijithi amabili, kufanele siqoqe ngokuzenzakalela amadijithi amabili okuqala bese sibuza: 'Mangaki ama-24's'? 52? ”Lokhu kunzima kakhulu ngoba ukuphindaphinda kuka-24 akukho etafuleni lethu lokuphindaphinda.
Esikhundleni salokho, sidinga ukuthola ngokuqagela (noma ukuqagela). Ukwazi ukuthi ama-2 aphindwe ka-25 abe ngu-50, 2 ukuqagela okuhle impela kwidijithi yokuqala yempendulo yethu, ama-2 aphindwe ama-24 angama-48 bese kuthi uma sikhipha ama-48 kuma-52 sithola okusele kuka-4. Kulungile, kuze kube manje sihle kakhulu Sengivele ngibhekane namadijithi amabili okuqala esabelo.
Manje ake sithathe idijithi yokugcina ukuxhuma okusele bese sibuza, “Mangaki '24's enza ama-48? ukuze kungasali okuseleyo. Impendulo yalenkinga yokuqala enamadijithi amabili ingu-22 Manje ake sibheke inkinga elandelayo.
Futhi inesihlukanisi esinamadijithi amabili ngakho-ke ake siqale ngendlela efanayo. Sizoqala ngengxenye yamadijithi aphindwe kabili esabelo sethu bese sibuza, 'Kuthatha amangaki ama-88 ukwenza ama-52 noma acishe abe ama-52?' Uh oh! uyayibona inkinga? Yize womabili enamadijithi aphindwe kabili, lokhu ngeke kusebenze ngoba ama-88 asevele engaphezu kuka-52.
Futhi lokho kusho ukuthi kufanele sithathe ingxenye enkulu kakhulu yaleyo dividend. Kufanele sifingqe amavesi okuqala AMATHATHU! Kepha kufana nokuxazulula yonke inkinga ngasikhathi sinye ngaphandle kokuyibhidliza ngezinyathelo! Yebo yingakho izinkinga zokuhlukanisa nabahlukanisi abakhulu kungaba nzima.
Uma une-divisor enamadijithi amabili noma amathathu, isinyathelo ngasinye singaba sikhulu njengayo yonke inkinga yokwehlukaniswa okude, futhi kungathatha isilingo esiningi nephutha ukukuthola. Eqinisweni, uma izinto bezihamba ngendlela yethu lapha kwi-Math Antics, lapho izinkinga zokuhlukana seziba nzima lokhu, besimane sivumele abafundi basebenzise ama-calculator ukuzixazulula. Yini esiyifunayo? I-Calculator! Sibafuna nini? Noma nini lapho sihlukaniswa isikhathi eside nabahlukanisi bamadijithi amabili noma ngaphezulu! Kulungile, kepha kuthiwani uma singaphumeleli futhi kufanele uxazulule le nkinga ngaphandle kwesibali? Yiliphi isu elihle kakhulu? Ukuqagela okuncane kuzosisiza ukuqagela impendulo yethu kangcono kakhulu.
Izinombolo ezingama-88 no-528 zinzima ukusebenza nazo, kepha uma siqagela lezi zinombolo uma sizishintsha zibe ngu-90, isibonelo no-500, lokho kuzokwenza kube lula ukuqagela impendulo.
Njengoba i-100 lizohlukaniswa ngama-500 izikhathi ezinhlanu ngqo, lokhu kusho ukuthi ama-90 ahlukaniswe ngama-500 okungenani izikhathi eziningi kangako. Ngakho-ke, ake siqagele okokuqala impendulo 5. Ukubona ukuthi kuhle kangakanani lokho kuqagela, siphindaphinda u-5 ngo-88, bese sikhipha ukusuka ku-528 ukubona okusele.
Manje i-5 × 88 iyinkohliso yodwa, ngakho-ke ungahle uthande ukusebenzisa iphepha lokuqala ukuze ulithole. Izikhathi ezi-0.5 ngu-88 ngu-440 futhi uma sisusa u-440 kusuka ku-528 sithola okusele okungu-88.
Hmmm kubukeka sengathi isilinganiso sethu besiphansi kakhulu.
Noma kunini lapho okusele kukhulu noma kulingana nesihlukanisi, kusho ukuthi siyibukele phansi impendulo. Njengoba okusele kwethu kulingana nomhlukanisi, kusho ukuthi sinamanye ama-88 ncamashi. Kwabelwane ngama-528.
Ngakho-ke bekufanele ngabe sikhethe u-6. Futhi uma uphindaphinda izikhathi ezi-6 88, uzobona ukuthi kungama-528. Njengoba ukwazi ukubona, yize indlela yokuhlukanisa ngokufanayo iyefana kuwo wonke lawa macala, inani lomhlukanisi lenza okukhulu umehluko ezinyathelweni zethu zokuhlukanisa.
Noma kunini lapho isihlukanisi sikhulu kunengxenye yesabelo esizama ukusihlukanisa, kusho ukuthi kufanele siqoqe amadijithi amaningi futhi sithathe izinyathelo ezinkulu zokuhlukanisa - inkinga yomhlukanisi. 817,152 ehlukaniswe ngama-38, ngizokusebenzisa lokhu ngokukhulu ukushesha, ngakho-ke uma kungenzeka ukuthi uyiphinde izikhathi ezimbalwa uma unenkinga yokukulandela. Njengoba sinesahlukanisi esinamadijithi amabili, ake siqale ngamadijithi amabili okuqala esabelo bese sibuza, 'Kuthatha amangaki ama-38 ukwenza ama-81? 'Futhi, sizosebenzisa imijikelezo ukuqagela impendulo. I-38 iseduze ne-40, kanti i-81 isondele ngempela i-80.
Futhi njengoba ama-80 ephindwe ka-2 ngama-40, ukuqagela kwami ​​ngenombolo yokuqala yempendulo ngu-2.2 × 38 = 76. Futhi u-81 kususwe u-76 kushiya okusele okungu-5.
Siyazi ukuthi ukuqagela kwethu bekuqondile ngokunembile ngoba u-5 ungaphansi kwesihlukanisi sethu sama-38. Manje siqhubekela enanini elilandelayo. Sithatha ikhophi yalokhu bese sikuhlanganisa ne-5 yethu bese sibuza, “Kuthatha amangaki ama-38 ukwenza ama-57? ? ”Lokho kulula ukukuhlola. 1 kuphela, ngoba ubona kalula ukuthi ama-38s amabili angaba makhulu kakhulu. 1 × 38 = 38.
Futhi okungu-57 okususwe ku-38 kushiya okusele kwe-19 siyabuza: “Ngaki udinga ama-38s ukwenza ama-191?” Lokho kunzima kakhulu. Ukwenza isilinganiso, ngizungeza lezi zinombolo ziye ku-40 no-200. Futhi ngiyazi ukuthi ama-40's amahlanu ahlanganisa aze afike ku-200, ngakho ukuqagela kwami ​​ngenombolo elandelayo ngu-5 × 38 = 190.
Futhi u-191 kususwe u-190 kushiya okusele kuka-1. Qhubeka sithathe ikhophi yedijithi yethu elandelayo bese sibuza, 'Kuthatha mangaki ama-38 ukwenza ama-15? I-15 ayinkulu ngokwanele ukuthi ihlukaniswe ngama-38.
Kepha ungakhathazeki, sesivele sazi okufanele sikwenze uma lokhu kwenzeka. Noma kunini lapho sizama ukuhlukanisa inombolo enkulu ngenombolo encane, simane sifaka uziro kulayini wezimpendulo bese sidlulela kwidijithi elandelayo. Sithatha ikhophi ye-2 bese siyayihlanganisa nensalela yethu engu-15.
Manje siyabuza, 'Kuthatha amangaki ama-38 ukuhlanganisa kuze kufike ku-152?' Ukulinganisa leyo nombolo, ngizozungeza lezi zinombolo ziye ku-40 no-160. Futhi njengoba u-4 × 40 = 160, ngifaka ezi-4 kulayini wezimpendulo njengesilinganiso. 4 × 38 = 152.
Futhi ama-152 asuse u-152 awashiyi okusalayo. Futhi sesiqedile! Hewu! Lowo kwakungumsebenzi omkhulu! Kepha ubonile ukuthi kusisize kangakanani ukuzungeza? Senze izilinganiso ezinhle njalo ngokuqoqa izinombolo esisebenze nazo. Kulungile, ngakho-ke manje uyazi ukuthi indlela yokuhlukanisa ende isebenza ngokufanayo ngezici ezinamadijithi amabili.
Ukuthi isinyathelo ngasinye sokuhlukanisa sizofaka amadijithi amabili noma amathathu esabelo. Futhi njengoba ngasinye salezi zinyathelo ezinkulu kunzima kakhulu ukusibeka phansi, kufanele usebenzise izilinganiso ukuthola izimpendulo. Futhi ngenkathi ukwazi ukuxazulula izinkinga eziyinkimbinkimbi zokuhlukanisa kuhle, sisacabanga ukuthi izinkinga zokuhlukanisa eziyinkimbinkimbi zingumsebenzi wokubala kwakho.
Ngakho-ke zama ukuvivinya umzimba okumbalwa, kodwa ungakhathali ukuzihlukanisa isikhathi eside kangaka. Ngemuva kwakho konke, sifunda izibalo ukuze sibe ngabaxazululi bezinkinga ezinhle futhi sikwazi ukuqonda zonke izinhlobo zemibono ebalulekile yezibalo, futhi kuningi kakhulu kwezibalo kunokuhlukanisa! Njengenjwayelo, ngiyabonga ngokubuka iMath Antics, futhi sizokubona ngokulandelayo Mal. Funda kabanzi ku-www.mathantics.com
Kungani izindlu zezinkanyezi zingamasayizi ahlukile?
Kokuhlangenwe nakho kwami ​​i-usayizikweIndluakwenzi mehluko ekuchazweni kweShadi Lokuzalwa.Ubukhulu obuhlukahlukene beNdluukubonakaliswa kwefayela le-IndluUhlelo olufana nePlacidus (engilusebenzisayo).Ubukhulu bendluzingalingani ngokwengeziwe kubantu abazalwa ezindaweni ezingaphezulu ezisenyakatho noma eziseningizimu.
Bekungeke yini kube kuhle uma ungabheka noma iliphi ishadi lendalo (elakho noma elelomunye umuntu) bese usheshe ubone ukuthi yiziphi izingxenye ezibaluleke kakhulu zobuntu nokuhlangenwe nakho kwempilo okujwayelekile? Kwenziwa kanjalo-ke. Okokuqala, udinga ishadi lomdabu. Masisebenzise okwakho njengesibonelo.
Uma ungenayo, ungasebenzisa isibali sami sokubala ishadi esilula futhi esisebenziseka kalula lapha. Khumbula ukuthi lesi sibali sisebenzisa ubukhulu bangempela nendawo yezinkanyezi ezaziwa ngokuthi i-sidereal astrology. Yazi ukuthi ezinye zezimpawu zakho zehlukile, ukuthola eminye imininingwane ngezimpawu zezinkanyezi, hlola le ndatshana emfushane echaza ngokuningiliziwe.
Manje singaqala. Kunezinto ezintathu eziyinhloko kunoma iyiphi imephu yezinkanyezi: izindlu, izimpawu, namaplanethi. Izindlu zimele amazulu ngesikhathi sokuzalwa kwakho.
Ngokuqondile, i-ecliptic, leyo yindlela amaplanethi ahamba ngayo esibhakabhakeni. Izindlu zakha amathambo emephu futhi zihlala endaweni efanayo kuwo wonke umuntu. Kumephu esentshonalanga njengaleyo esiyisebenzisa namuhla, ingxenye engakwesokunxele yeshadi imele umkhathizwe osempumalanga, owaziwa nangokuthi ukukhuphuka noma ukukhuphuka.
Lokhu kungukuqala komdwebo, futhi izindlu ziqala lapha. Qala ngendlu yokuqala ehambisanayo iye kweleshumi nambili. (Qaphela ukuthi ababhula ngezinkanyezi basebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene zezindlu.
Ngakho-ke i-ascendant ingaba sendaweni ethile endlini yokuqala, noma ungaqaphela ukuthi izindlu zikwezinye Uhlelo esilusebenzisayo namuhla nokuthi i-calculator yami elusebenzisayo lubizwa ngokuthi uhlelo lwendlu olufanayo oluhlukanisa i-ecliptic lube yizingxenye eziyi-12 ezilinganayo eziqala ku-ascendant . Ungasebenzisa noma yiluphi uhlelo oluthandayo.) Ngaphesheya kwalowo Ascendant uyinzalo, njengoba ungacabanga, iyisibhakabhaka noma isimo sengqondo.
Ingxenye engenhla yomdwebo imele ingxenye ephezulu kakhulu ye-ecliptic esibhakabhakeni, nengxenye engezansi, okungaphansi kwesibhakabhaka noma isibhakabhaka esingabonakali. Zisho ukuthini lezi zindlu kulo mdwebo? Ngoba izindlu zimele izindawo zezulu: Ekufundweni kwezinkanyezi izindlu zimele izindawo zempilo. Ukuqala ngendlu yokuqala, emele yonke imikhakha yempilo yethu ephathelene nathi uqobo njengokuzibona, izisusa, izinhloso zethu, umzimba wethu, ukubukeka kwethu, njll.
Owesibili uhlobene namagugu ethu njalonjalo. Izindlu zimele lokho esingakubiza 'ngezindawo zempilo'. Ingxenye elandelayo yeshadi lokuzalwa yizimpawu - i-ecliptic kwakuyizimpawu ze-zodiac ngesikhathi sokuzalwa kwakho.
Yisiphi isibonakaliso esivele, esethiwe? Yilapho ukuhumusha ngakunye kungaqala khona, njengoba manje sinezinto ezimbili zomdwebo ongawuqhathanisa. Umuntu angasho ukuthi izimpawu zezinto zasezulwini ziyakhombisa ngesikhathi sokuzalwa kwakho. Indlela elula yokukhumbula ukuthi bameleni ukubabheka njengezimpawu zempilo.
Kusukela ekuqondeni kwama-Aries kuya ekwamukelweni kwamaPisces, izimpawu zezinkanyezi zibonisa izimfanelo eziza ngezinto zethu zokuphila t, amaplanethi, amele okwenzeka empilweni yethu. Le mizimba yesikhashana ezulwini ikhombisa ukuzizwela kwethu kwesikhashana lapha emhlabeni. Njengenjwayelo, lokhu okuhlangenwe nakho kubumba ubuntu bethu.
Kukuyiphi indlu iplanethi esitshengisa kuyo ukuthi le ndawo yokuphila kwenzeka kuphi; whatsign ukuthi yiziphi lezi zimo eziqukethe lezi zimo. Mayelana nobuntu bethu, izindlu zikhombisa ukuthi yiziphi izindawo zokuphila eziyizindawo ezibalulekile kithina; izimpawu ezivelele ebuntwini bethu. Kulula ukucabanga ngamaplanethi njengokuhlangenwe nakho kwempilo okwakha ubuntu bethu.
Manje ake sibone ukuthi i-horoscope yakho ithini ngawe. Ekuhlaziyweni okujwayelekile kweshadi lokuzalwa, ake siqale ngezakhi eziyisisekelo kuqala. Ngamanye amagama, izakhi eziyisisekelo zobuntu bakho kanye nakho konke okwenzeka empilweni yakho.
Kunezinto ezine eziyinhloko zeshadi ezibonisa lokhu. Ilanga lakho, inyanga, i-ascendant, nombusi okhuphukayo, owaziwa nangokuthi umbusi wakho weshadi. Empeleni, sibheke indawo yendlu nesiginesha yalezi zinto ezine (ngaphandle kwe-ascendant, ekhombisa isibonakaliso kuphela, kepha sizokuthola kamuva.
Ake siqale ngelanga nenyanga yakho. Lezi zinto ezimbili zimelela okuyisisekelo nokubaluleke kakhulu, i-yin) ne-yang, izakhi zakho. Ilanga limele uhlangothi lwakho olubheke ngaphandle, oluzwakalayo nolwesilisa.
Ngenkathi inyanga imele uhlangothi lwakho lwangaphakathi, olubonakalisayo nolwesifazane. Ngokubambisana, la maplanethi akha iningi lobuntu bakho bangaphakathi nangaphandle. Kanye nezinhlobo zokuhlangenwe nakho okuphikelelayo okuthinta ilanga nenyanga ku-horoscope yakho.
Zimelwe lapha yilezi zimpawu. Lapho usuthole indawo yokuhlala neyokusayina kwelanga lakho nendlu nokusayina ukuma kwenyanga yakho, sebenzisa la ma-PDF ukuthola ukuthi yiziphi lezi zinto eziyisisekelo zobuntu bakho bangaphakathi nangaphandle futhi khumbula ukuthi ukufakwa kwendlu kukhombisa izindawo impilo ebalulekile kuwe nezindaba ezibalulekile empilweni yakho. Isibonakaliso sikhombisa izici ezibangelwa ubuntu bakho kanye nokuhlangenwe nakho kwakho kwempilo.
Ilanga lakho limele isiqu sakho sangaphandle kanti nenyanga imele umuntu wangaphakathi. Manje ake sibheke i-ascendant kanye ne-chart yakho. Lezi zinto empeleni zimelela ukuthi impilo yakho iqhubeka kanjani nokuthi yini ebumba ubuntu bakho ngokuhamba kwesikhathi.
Ufana nelanga nenyanga yakho, ngaphandle kwendlela yokuphila nemicimbi yokuphila, eqhubeka ibumba ubuntu bakho. Lokhu ungakucabanga njengalokho ozoba yikho, okumele ngokuqinile wena nempilo yakho ku-horoscope. I-ascendant yakho imele izimfanelo othathwa njengazo. thuthukisa umphumela wokuhlangenwe nakho kwakho kwempilo.
Kukhona uphawu olulodwa kuphela oluhlotshaniswa nalo ngoba luhlala luhlotshaniswa nendlu yokuqala. Umphathi wakho wemephu, ngakolunye uhlangothi, empeleni yiplanethi elawula uphawu lwe-Ascendantis yakho. Ukuma kwendlu nokusayina umbusi weshadi kukhombisa ukubukeka okuningiliziwe, hhayi nje kuzici ozithuthukisayo, kodwa nasendaweni yempilo.
Okokuqala, ake sikhombe uphawu lwakho olukhulayo. Bheka izakhiwo zalo mlingiswa usebenzisa i-PDF efanayo ebesiyisebenzisa phambilini. Khumbula, lezi yizimfanelo ezizovela kokuhlangenwe nakho kwakho kwempilo jikelele futhi ezizokwenza ube yilokho ozoba yikho.
Lezi izimfanelo ezibaluleke kakhulu okufanele uzihlakulele empilweni yakho. Manje ake sikhombe irula yakho. Q Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi yiliphi iplanethi elilawula uphawu lwezandla zakho.
Sebenzisa le PDF lapha ukuthola uhlu lwababusi ngalunye lwezimpawu ze-zodiac. Ungathola ukuthi unezimbili, lapho uzomaka womabili amaplanethi njengoba ezobaluleka ngokulinganayo. Uma usukhombe umbusi wakho weshadi, thola ukubekwa kwendlu nokulingiswa kwakho, njengoba nje wenze ngeLanga neNyanga.
Sebenzisa ama-PDF afanayo ebesikade siwasebenzisa ukukhomba ukuthi yiziphi izindawo zokuphila nezici ezakha ubuntu bakho ngokuhamba kwesikhathi Ishadi Lombusi limele wena ku-horoscope nokuthi yini eyenziwayo. Kuleli qophelo ekuhlaziyweni kwakho usuthole izakhi ezine eziyisisekelo zeshadi lokuzalwa. Ukuhlaziywa nokuqondwa kwalezi zingxenye ezine kukodwa kuzoba nomthelela ekuqondeni okukhulu ubuntu bakho kanye nokuhlangenwe nakho kwakho okuvelele empilweni.
Ungasebenzisa inqubo efanayo kumdwebo wanoma yimuphi umuntu. Kulabo kini abafisa ukuqhubekisela phambili ukuhlaziywa, kufanele nibheke izinhlangano ezisemqoka ezakha phakathi kwalezi zingxenye ezine namanye amaplanethi eshadini lokuzalwa. Lokhu kubizwa ngezici.
Izici zingatholakala ngaphakathi kwe-horoscope eceleni kwe-horoscope noma zombili. Nayi i-PDF ngokubaluleka kwezici ezahlukahlukene zokuhlaziya kwakho okuqhubekayo. Okulandelayo, ungabheka amaplanethi angaphakathi iMercury, Venus, neMars.
Ngemuva kwalokho amaplanethi aphakathi: iJupiter neSaturn. Kulandelwe amaplanethi angaphandle u-Uranus noNeptune. Futhi izinkanyezi ezinomsila: Chiron noPluto.
Ukuhlaziywa kokubekwa kwabo kwezindlu nezimilo. Qaphela ukuthi izici zobuntu ziyajula futhi zingacaci njengoba uqhubekela phambili emaplanethi akude kakhulu. Ifana no-anyanisi lapho ungqimba lwangaphandle lobuntu bethu nesipiliyoni kuyizinto ezine eziyinhloko esizimboze kule ndatshana.
Kulandelwe amaplanethi angaphakathi, maphakathi, bese kuthi lawo angaphandle abe maphakathi no-anyanisi. (Njengenothi eseceleni, naka kakhulu amaplanethi asendlini yokuqala njengoba ejwayele ukuqhamuka ngokuqinile ebuntwini nasekwazini.) Nalu uhlu lwamaplanethi amakhulu akhombisa ukuthi iziphi izici zobuntu nesipiliyoni empilweni abazimele.
Ngokuzijwayeza okuqhubekayo, ikakhulukazi okugxile ezingxenyeni ezine eziyinhloko zeshadi lokuzalwa elichazwe kule ndatshana, uzokwazi ukuhumusha ishadi lendalo ngokushesha, kumzuzwana nje.
Zisho ukuthini izindlu eziyi-12 ekufundweni kwezinkanyezi?
Eshadini lakho lokuzalwa, wonke amaplanethi afafazwa kuwo wonkeIzindlu eziyi-12 zezinkanyezi, ngayinye emele indawo ehlukile yokuphila kwakho. Isethi yesibili yezingcezu ezigqagqene eshadini lokuzalwa zimelela i-12izimpawu ze-izinkanyezi, futhi lokhu kungabukeka kwehlukile kuwo wonke umuntu.16. 2018.
Kungani emhlabeni Izindlu Zokufundwa Kwezinkanyezi zibaluleke kangaka? Eqinisweni, zibaluleke kangangokuba zenza cishe u-50% weshadi lakho lokuzalwa. 50%! Uyahlanya, akunjalo? Kepha ungakhathazeki, ekugcineni kwalesi sihloko ekugcineni uzobona ukuthi indlu ngayinye yokufundwa kwezinkanyezi isho ukuthini nokuthi isho ukuthini kuwe nakwabanye abakuzungezile. Hola izimbali zami ezinhle ze-lotus ngiyabonga ukuthi ubuyile futhi kulabo abasha ngiyabonga ngokuba lapha ngikwazisa kakhulu lapho ufuna ukuzuza kakhulu ekufundweni kwezinkanyezi, ngokomoya nangamaphupho.
Lona ngumphakathi wakho. Omunye wemibuzo evame kakhulu engiwutholayo ngokufundwa kwezinkanyezi kumayelana nezindlu, ngakho-ke ngihlala ngichazela laba bantu ku-Instagram ukuthi izindlu zisho ukuthini futhi bahlala bekhululekile kangangokuthi empeleni abanzima njengoba babecabanga ekuqaleni, futhi mina yazi ukuthi nawe usukulungele ukufunda ngendlu, ngakho-ke ake singene ngqo kulwazi olulindele, yiziphi izindlu ezingaphambili kuqala Ake siqale, ake ngicacise izinto ezimbili ngezindlu ukuze unikele Ungalahleki. Yonke indatshana yokuqala kule ndatshana, ngizohlola nje imininingwane ebalulekile yendlu ngayinye nokuthi kusho ukuthini empilweni yakho njengendatshana yonke kalula kalula Kunemininingwane eminingi kakhulu ngayo yonke indlu engiyiwinile Ungazami ungene ku-.
Ngakho-ke uma ngiphuthelwa okuthile okubaluleke kakhulu ku-Youthink, ngiyaxolisa ngempela, kodwa zizwe ukhululekile ukwengeza okuthile kumazwana angezansi. Ngiyathanda ukubukela ingxoxo yokufundwa kwezinkanyezi futhi mhlawumbe sonke singafunda kuwo wonke amanye amasekhondi kuliqiniso ngezindlu ofuna ukuzigcina zikule ndatshana ngakho futhi awusona isipele. Khumbula ukuthi kunezimpawu eziyishumi nambili ze-zodiac futhi kukhona nezindlu eziyishumi nambili, kepha zombili ziyizimpawu ezihlukile ze-zodiac ezinquma izici ezithile zobuntu nama-quirks onawo, ngaphandle kwazo zonke ezinye, izindlu zikhuluma ngezindawo ezithile zempilo yakho Njengeyakho Ukuphila impilo kulezi zigaba ezithile Abantu abaningi abadidekile ngukuthi izindlu zilandela inhlangano eyodwa kuya kwayi-12 njengezimpawu zezinkanyezi, ngokwesibonelo indlu yokuqala nayo ilawulwa uphawu lwezinkanyezi i-Aries ngakho-ke zinezici ezifanayo, kodwa nakhu futhi uma ufuna ukukhombisa umuntu nobuntu bakhe ngenkathi indlu uqobo iyindawo yokuphila, ungathola ukuthi ubala ishadi lakho lokuzalwa futhi ngizoba nezixhumanisi ezimbalwa ngezansi kusuka kumawebhusayithi amahle ukukusiza ukubala i-horoscope yakho yezinyoni ukukusiza ukulandela kangcono le ndatshana noma ufunde kulesi sihloko.
Ngakho-ke uma ubala elakho ungathola ukuthi uma ubheka ishadi lami lokuzalwa, uzothola ukuthi izindlu zakho zinezindawo ezihluke ngokuphelele kunezami futhi lokho kungenxa yokuthi zihamba ziphikisana nemilaza yezinkanyezi, ukuze izinkanyezi zezinkanyezi indawo esibhakabhakeni ngaso sonke isikhathi, kodwa amaplanethi nenyanga enyukayo sonke sihamba ezinkanyezini zezinkanyezi izindlu ziyahamba kodwa ngoba zinamathele ekujikelezeni kwe-eksisi yomhlaba indlu yokuqala ekufundweni kwezinkanyezi ibizwa ngokuthi indlu des Self it senziwe ngophawu lwe-zodiac Aries neplanethi iMars, ngakho-ke le ndlu empeleni iyona enquma isibonakaliso sethu esikhuphukayo, esaziwa nangokuthi isibonakaliso sethu esikhuphukayo futhi uma ungazi ukuthi siyini, le ndlu kulapho kufanele ubuke khona lokhu isihloko. Imoto izobe ilapha kanye nesixhumanisi sizoba sencazelweni ngoba nginikeza ukuphindwaphindwa okuphelele kokuthi uhlobo ngalunye lwesibonakaliso kumdwebo wakho we-zodiac lisho ukuthini, kodwa kusukela endlini yokuqala, uphawu lwakho olukhuphukayo, uphawu lwakho olukhuphukayo, luthole empeleni kunquma wena njengomuntu nokuthi uqhubeka kanjani nawo wonke umuntu okuzungezile, ngakho-ke yonke into kusukela endleleni ogqoka ngayo nendlela othambekele ekusebenzisaneni ngayo nabanye kunganquma noma yikuphi okuvela kuqala endaweni Abantu benu kini ukuthi niyathanda yini gqoka izingubo ezimnyama noma ngabe uthanda ukugqoka ngobuhle zonke lezi zinhlobo zobuso zizobonakala endlini yakho futhi uphawu lwe-zodiac neplanethi nakho okuyingxenye yale ndlu yindlu yesibili esinayo, ibizwa ngendlu yezimpahla futhi le ndlu ilawulwa yiplanethi i-Venus kanye nesibonakaliso se-zodiac i-Taurus, yize le ndlu ingumbono ojwayelekile wezinto ezibonakalayo futhi okuhehayo kwethu kumelela Izinto zezinto ezibonakalayo empilweni, futhi kunquma inani, ukuthi ngubani esimethembayo, kungani silazisa, njll.
Izinto esinazo empilweni yethu ngaphezu kwenala yezinto ezibonakalayo zinqunywa ngokubekwa kwempahla yethu yonke. Indlu ikhuluma ngezinga lethu lokugcwaliseka ngokwezinto ezibonakalayo mathupha, noma ngabe umuntu kunguyena okwazisa kakhulu impumelelo yengcebo yezinto ezibonakalayo noma impumelelo yokuthola ingcebo yezinto ezibonakalayo ngezindlela zokomoya, izindlela zobuciko, njll. Indlu yesithathu ku-zodiac yile Ndlu ka Ukuxhumana, nakho kubuswa yiplanethi iMercury kanye nesibonakaliso se-zodiac iGemini.
Isici esiyinhloko sempilo esithinta le ndlu yindlela ocabanga ngayo nokuhlaziya izimo nokuthi lokhu kukuthinta kanjani ukuxhumana kwakho nabanye abantu, noma ngabe uthambekele ekukhulumeni nabanye, noma ngabe uvame ukuba namandla kakhulu, noma ngabe unamahloni , konke lokhu kungahunyushelwa endlini yakho yesithathu futhi lapho kubekwe khona kumdwebo wakho indlu yesine yindlu umndeni kanye nekhaya, elibuswa yinyanga yomhlaba kanye nomdlavuza wezimpawu zezinkanyezi lokhu kulawula isisekelo sethu somzwelo sokugcwaliseka futhi indlela thina Ukukhuliswa okunomthelela kuthonywa ngayo ukuze imiphumela yendlu yesine nayo izwakale ngamandla njengoba ucabanga impilo yasekhaya yangakusasa noma ukuthi uzoyigcina kanjani impilo yakho yasekhaya yamanje. Yilapho ingxenye yasekhaya yegama isebenza khona. Lapho ekugcineni unquma ukuhlala phansi, ingabe ufuna ikhaya okungelakho nje? Ngabe ujwayele ukuba nezinhlobo ezithile ze? Imihlobiso oyikhetha ngaphezu kokuthandwa ezinye izinto njengendlu yesihlanu esinayo yindlu yenjabulo ebuswa yilanga nesibonakaliso se-zodiac Leo usichitha kanjani isikhathi emvelweni, noma ngabe uthanda, ngezinto zocansi njengokuthenga, noma yini wenza empilweni yakho ukudala injabulo nobumnandi, ngaphambi kokuthi siqhubeke, i-co note engezansi uma uthola ukuthi indlu ethile ithakazelisa kakhulu kunezinye nokuthi yini oyifundile kuze kube manje qiniseka ukuthi uyayithanda uma uyithanda ' Ngithande le ndatshana kuze kube manje futhi uyibhalisele ukuze ungakhohlwa bese ushaya insimbi ngale ndlela.
Lapho ngishicilela izindatshana ezintsha zokufundwa kwezinkanyezi njalo ngoLwesibili nangoLwesihlanu, indlu yesithupha esinayo yindlu yosizo, nayo ephethwe yiplanethi iMercury futhi ephethwe yiVirgo, uphawu lwe-zodiac, ukuthi sibhekana kanjani nayo, kuya ngokuthi kubekwa kuphi. Uma ubekwa kahle kule ndlu uzobe ukuzo zonke izigaba ezintathu, kepha uma ukubekwa okungalungile ungahle uthwale kanzima kunoma iyiphi yalezi zigaba noma kuzo zonke uzabalaze ezintathu zazo empilweni Indlu Yesikhombisa Esinayo ibonwa njengendlu yobambiswano, futhi lokhu kubuswa futhi ngumfakisicelo uVenus kanti uphawu lwe-zodiac Libra ps luzoba nomthelela empilweni yakho yilokho ofuna ukusebenzisana kwakho kwezothando nokuthi lokho kuthinta kanjani, ngokwesibonelo, yini okubalulekile kuwena ukuthi kuyimpumelelo yemali nomlingani wakho ukuthi uma ukwazisa ukuheha ngokocansi izinto ezinjengalezo sonke sizonquma ngokuya ngokubekwa kwakho kule ndlu into yesibili enqunywe ngokuqinile yile ndawo kungenzeka ukubambisana kwakho ebhizinisini futhi kungazwakala kuyamangaza, kepha empeleni, ufuna amanani afanayo kubambiswano lwebhizinisi njengakwibambiswano lamaRoma ntic ngoba nje le Ndlu inquma zonke izindawo zobudlelwano nabanye abantu ngicela empilweni yakho ozoba seduze kwakho ukuze wazi ukuthi ungabonga umuntu onomqondo ofana nowakho maqondana nezothando nokuthi lelo Bhizinisi linakho. Ukuyala kakhulu lobu budlelwano nendlela abadlala ngayo empilweni yakho, owesishiyagalombili indlu esinayo yindlu yabayisithupha futhi empeleni yenziwa yi-pl.
I-AnetPluto, engiyaziyo, ayisathathwa njengeplanethi, kepha ekufundweni kwezinkanyezi kuyabuswa ngenxa yethonya layo elinamandla futhi kubuswa uphawu lwe-zodiac iScorpio, ngakho-ke kubuswa kanjalo ngenxa yale planethi nenhlanganisela yezodiac elawulayo le ndlu emnyama kunazo zonke e-zodiac ingacatshangelwa, okungukuthi, ngakho-ke, inegama lesidlaliso, kuya ngokuthi ikuphi le ndlu, yilapho uzothola khona izifiso zakho ezijulile ezimnyama, izimfihlo zakho ezimnyama kakhulu, ama-taboos akho, ukulinganiselwa kwakho, noma yini izinselelo onazo, konke lokhu kuthonywe kakhulu yile ndlu, ngakho-ke izindawo ezimbili ezinkulu kakhulu empilweni yethu ezithonywe kakhulu ukubekwa kwale ndlu ucansi nokufa, ukuze ukufa futhi kumele ushintsho empilweni yakho, ngokwesibonelo, ingabonisa ukuthi ubhekana kanjani nokufa empilweni yakho kanye nezehlakalo ezingenzeka empilweni yakho maqondana nokufa nangendlela obhekana ngayo nakho, kepha lapho Ngaphezu kwalokho, kusho nokuthi uphawu oluyimfihlakalo njengokuguqula, ukuphindukuzalwa, ukuguqulwa n futhi w Singafunda okuningi endlini yesishiyagalombili ngoba ikhuluma ngale mikhawulo nalokhu kulangazelela okujulile nezinto esizama ukugqashula kuzo, njengokuthi indlela obhekana ngayo nokufa nokuzalwa kabusha izosho okuningi kusuka le ndlu futhi ungafunda okuningi kuyo uma uyinaka, futhi uma kukhulunywa ngocansi, inquma ucansi nokubekwa kwale ndlu ngendlela ecishe ingaqondakali le ndlu ibona ucansi njengokuxhumana okungaqondakali phakathi kwemiphefumulo emibili kunalokho kunesenzo nje somzimba phakathi kwemizimba emibili yenyama Indlela le ndlu ebekwa ngayo kumashadi akho izothinta kakhulu ulwazi lwakho lwezocansi nokuthi ulubona kanjani. Futhi, indlu yesishiyagalombili yaziwa ngokufanekisa kahle ukuthi uzobhekana kanjani nezimali ezivamile empilweni yakho - kungaba yizimali zomlingani wakho nabangane bomndeni, njll. Indlu yethu yesishiyagalolunye yindlu yefilosofi futhi lokhu kuba iplanethi i-Jupiter kanye nomthetho we-zodiac sign Sagittarius, ngakho-ke indawo okuyo le ndlu izothinta kakhulu indlela owandisa ngayo ama-horizons akho angokomoya nemfundo yakho ephakeme.
Ngakho-ke noma ngabe ungumuntu owamukela ubuKrestu, noma ngabe ungumuntu owamukela ubuBuddha, noma ngabe awukholelwa kuNkulunkulu, zonke lezi zinto zinqunywa ngokubekwa kwale ndlu ku-horoscope yakho futhi kunqunywa yimfundo, ngakho-ke noma ngabe ufuna imfundo ngohambo noma ngedigri, konke lokho kungangena ngaphansi kwale ndlu, eyaziwa nangokuthi yiNdlu Yesimo Sezenhlalo ngeplanethi iSaturn neCapricorn, le ndlu ingenza indlela yomuntu yokusebenza ibe nethonya elinamandla. Kunomthelela omkhulu emsebenzini wakho nalapho ungagcina khona kamuva empilweni yanoma iyiphi indlu, kepha okungaqondakali kahle ukuthi le ndlu ikutshela ukuthi kufanele ube kulo mkhakha osuzongena kuwo, kodwa lokho kungenzeka yiba neqiniso Njengoba le ndlu igxile emsebenzini okufanele ngabe uyawenza ngenxa yomsebenzi wakho uthando nokuthanda okuthile, akugxile emsebenzini okufanele uwenze ngokuzibophezela noma wazi ngoba kufanele, noma isibopho noma ngabe yini uma kuziwa engqikithini yalokho okuthandayo ngempela nokuthi yini okufanele uyibheke empilweni, impumelelo enkulu nenjabulo emsebenzini wakho kanye nokuba sesidlangalaleni iqiniso elimnandi ukukunikeza isibonelo esingcono osaziwayo abavame ukuba naso indlu yabo eyi-10 kuLeo, futhi kungenxa yokuthi uLeo ujwayelene nendlu ye-10 ukukhombisa ukuthi unesikhundla esisodwa esidlangalaleni, uzokwaziwa kwabanye abantu abaningi othanda ukuba yisikhungo sempilo nokuthi iyiphi indlela engcono yokuba isikhungo seqembu labantu kunokuba sibe uhlobo oluthile losaziwayo noma ukuba nale ndlu enesimo senhlalo, kuthinta kakhulu nendlela amaqembu abanye abasibona ngayo, ukuthi bakwehlulela ezinkundleni zokuxhumana noma kubantu osebenza nabo ababuswa kakhulu yile ndlu futhi yingakho kuthiwa umqondo we-karma uxhumeke kakhulu ukuze isithombe nemininingwane nalokho okudlulisela kwabanye lapho kubuye kuwe. Indlu ye-11 ibizwa nangokuthi yindlu yobungani futhi lokhu kuvela eplanethi u-Uranus enophawu lwe-zodiac u-Aquarius, naye olulawulayo, futhi lokhu kuzoba uhlobo lokwelulwa kwendlu edlule, indlu yesimo senhlalo futhi be on Expanding our personal social life and business social life so this the placement in your chart will impact indlela osebenzisana ngayo nempilo yakho yezenhlalo, ukuthi usebenza kanjani emaqenjini nasezinhlanganweni kunokugxila nje emisebenzini yethu nakwethu Ukugxila empumelelweni yomhlaba indlu edlule ngandlela thile igxile kule ndlu, ithuthukisa indlela ohlakulela ngayo lobu budlelwano futhi uthuthukise lobu budlelwano ngokuqhubekayo.
Empilweni yakho lapho-ke sinendlu yeshumi nambili, ebuye ibhekise endlini yomuntu ongazi lutho, ngakho-ke le ndlu ilawulwa yiplanethi iNeptune kanye nesibonakaliso se-zodiac Pisces nayo yonke imithetho eyimfihlakalo, noma ngabe ungaphezulu Ukukhuluma ngendawo yomoya, ama-tarot fortune ukutshela abangane konke okunjalo kubuswa lokhu kubekwa kwendlu futhi kuya ngokuthi ikuphi kushadi lakho kuzonquma ukuthi uxhumeka kanjani nombuso ongaqondakali ongokomoya. Kubuye kubhekwe kakhulu njengendlu elawula i-karma yomuntu empilweni yabo, ngakho-ke abantu abaningi besaba ukwazi ukubekwa kwabo kwindlu yeshumi nambili. Abantu abaningi bacabanga ukuthi kuluhlobo lwetabhu, kepha empeleni kubaluleke kakhulu ukunakekela ukubekwa kwakho endlini yeshumi nambili ngoba icishe ifane nendlu yesishiyagalombili, indlu yobulili, le ndlu ikutshela imikhawulo yakho ejulile nezinto uzama ukugqashula futhi umele uhlobo oluthile lokuzalwa kabusha, ngakho-ke indlu yeshumi nambili iyafana ngalomqondo, ngaphandle kokuthi iyisazela ngakho iyajula kakhulu, ngakho-ke le yimikhuba nezinto esizicabanga ngokucabanga ngokunganakile ukuthi angazi ukuthi kungenzeka ngempela, uma sinakekela, kungasishintsha ngokomoya, ngokwengqondo nangokomzimba, uma sikhetha ukufunda kukho esikhundleni sokubalekela ukwazi uma le ndatshana ibikusiza kuwe, qiniseka qhubeka uchofoze isixhumanisi encazelweni bese ujoyina umphakathi we-Lee Blue Lotus Facebook ukuze uthole okwengeziwe nge-Astrology-Crystal-Spirituality-Enlightenment kungekudala Ukunaka amandla eplanethi, izimpawu zezinkanyezi nezinye izinto eziningi ezipholile ming, futhi ungakhohlwa ukubuka lezi zihloko uma ungenzanga kahle ngoba zizokufundisa okuningi ngokufunda izinkanyezi.
Iyiphi indlu enamandla kakhulu ekufundweni kwezinkanyezi?
Ngoba angularizindluyiboenamandla kakhuluizindawo eshadini (uLilly uthi 'Amaplanethi ngama-engeli enza.'Okuningibakhombise ngenkani imiphumela yabo '), succedentizindluokuncaneenamandlakune-angular kodwaenamandla amakhuluukwedlula i-cadentizindlufuthi unekhwalithi yokuqinisekisa i-angularizindlu, njenge ...
Lubizwa ngani uphawu lwendlu yokuhlukanisa?
Umugqa wesibonakaliso esinamandla noma esideindlu ehlukanisayokunjalokubizweisibopho. I-uphawuiyasetshenziswa ukwehlukanisa isahlukanisi kusihlukanisi, futhi idwetshwe njengabakaki abalungile nge-vinculum enamathiselwe (bona umfanekiso ongenhla) onabela kwesokudla.1. 2020.
Siyini esinye isibonakaliso sokwehlukana?
Okunyeizimpawu ze-ukwahlukanafaka i-slash noma i-solidus /, ikholoni:, kanye nebha yezingxenye (umugqa ovundlile kuukuingxenyenamba eqondile).
Kungani izindlu zePlacidus zingalingani?
I-I-PlacidusIsistimu ivumela ukuthambeka komhlaba okuhlobene ne-ecliptic - ngakho-ke i-Izindluzihlanekezelwa kakhulu njengoba izindawo zokuzalwa zisondela eNyakatho naseNingizimu Poles.
Iyini indlu ebanjiwe ekufundweni kwezinkanyezi?
Izindlu ezibanjiwekukhona lapho aindluitholakala phakathi kokuhlukaniswa okubiliindluukukhipha, kephaindlufuthi ungene ngemvume ekubuseni umthetho phezu kwangempelaindluukukhuphuka okwakho.ishumi nanhlanu. 2019.
Uyini umbusi wendlu ye-12?
Abantu abangu-38 bayayithanda! Imisebenzi yendlu ye-12 isebenza ku-ajenda yendlu yokuqala. Ukukhulula usizi nosizi, ukuba wedwa, ukweqa, ukusebenza kwengqondo kanye nokwazi ukuzilimaza kusiza isithombe, ubuntu, isimilo, indlela yokuziphatha, ukubukeka kanye nokuzazi.
Zisho ukuthini izindlu ku-Zodiac?
Izindlu zezinkanyezichaza izindawo eziqonde ngqo zempilo yakho i-horoscope yakho ebhekise kuyouku. Ngokwesibonelo, indlu ngayinye imelela okuthile okuhluke ngokuphelele; zinquma izinhlobo ezahlukene zabantu, izindawo, nezimo zempilo ohlangabezana nazo kulesi sikhathi sempilo.amashumi amabili nanye . 2017.
Zingaki izindlu ezikhona ohlelweni lokufundwa kwezinkanyezi?
Zonke izinhlelo zasendlini ekufundweni kwezinkanyezi kwaseNtshonalanga zisebenzisa izindlu eziyishumi nambili ezicatshangelwe kwi-ecliptic. Umehluko uqhamuka lapho indiza eyisisekelo iyinto yokwehlukaniswa kokuqala nokuthi ngabe izigaba zimelela amayunithi wesikhathi, noma amadigri ebanga. Uma isikhala siyisisekelo sokwahlukana kwendlu, indiza ekhethiwe ihlukaniswe ngama-arcs alinganayo angama-30 ° lilinye.
Ngabe kukhona ukwahlukana emkhakheni wezinkanyezi?
Kunokwehlukana okuhlukahlukene ngaphakathi kwendaba yokufundwa kwezinkanyezi ngokwenhloso yokudweba nokuhumusha ishadi. Leli gatsha lokufundwa kwezinkanyezi lilawula impilo yomuntu futhi lisebenzisa i-horoscope eyakhelwe isikhathi sokuzalwa kwesihloko noma esinye isikhathi esibalulekile empilweni yakhe.
Lithini igama lendlu ekufundweni kwezinkanyezi kwamaNdiya?
Ku-horoscope ngayinye, noma yiluphi uphawu oluthatha noma iyiphi indlu olunikezwe lungacatshangwa njengomqashi wendlu. (Bheka isigaba Sokubusa ngezansi.) Ekufundweni kwezinkanyezi kwaseNdiya, izindlu eziyishumi nambili zibizwa ngeBhava futhi zinezincazelo ezifanayo kakhulu nozakwabo baseNtshonalanga.